Global Voices teny Malagasy · 20 Mey 2011
20 Mey 2011
Tantara tamin'ny 20 Mey 2011
Espaina20 Mey 2011
An'aliny ny olona nirotsaka an-dalambe tany Espana tamin'ity herinandro ity mba hanohitra ny kolikoly, ny tsy fahazoana antoka ny ampitso, ny tsy fisian'ny asa ary ny rafitra politika tsy misy afa-tsy antoko roa. "Tsy entam-barotra eny an-tànan'ny banky ny mpanao politika akory isika," no teny fanevan'ireo olona an'aliny nanao fihetsiketsehana...
Okraina : Mibilaogy hamantarana ny momba ny tena
Okraina20 Mey 2011
Ho an'ireo mpidoroka zava-mahadomelina, mitondra fiovana azo tsapain-tanana eo amin'ny fiainany ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanoloana [izay iankinana]. Ny fiverenana amin'ny fiainana mahazatra taorian'ny fahazarana mampiasa tsindrona zava-mahadomelina teo amin'ny fiainana, dia mitaky fiovana tsy eo anivon'ny fomba fiaina ihany fa fiovana koa eo anivon'ny toe-tsaina. Tokony hihevitra indray ny momba ny fiainany,...
Panama: Fahatsiarovana an'i Raúl Leis
Amerika Latina20 Mey 2011
Tamin'ny 30 aprily, nodimandry tampoka ilay sôsiology sady mpanoratra Raul Leis. Taorian'ny nahafatesany, nivoaka tamin'ny gazety sy tany amin'ny bilaogy ny asa sorany sy ny momba azy, izay nanasongadina ny zava-bitany, ny nataony sy ny fandraisany anjara tamin'ny fiaraha-monina Panameana. Tao koa ny teny mampihetsim-po nanaovam-beloma azy sy ny fampahafantarana...
Gresy: fanafihana misesisesy atao amin'ireo mpifindra monina ao Athène
Eoropa Andrefana20 Mey 2011
Tao ho ato izay dia niha-nahazo laka ny tahaka-ny-fandringanana ireo mpifindra monina tany afovoan-tanànan'i Athènes nataon'ireo antoko mahery fihetsika ao Athènes . Tamin'ny 10 May no nanomboka nisian'izao toe-draharaha izao raha iny ka nitondra ny vadiny bevohoka ny lehilahy iray 44 taona ka nisy namono ary notsatohan'ny olona tamin'ny antsy...